Ahoana ny famerenana ny hafatra voafafa amin'ny Snapchat
Snapchat dia iray amin'ireo fampiharana lahatsary be mpampiasa indrindra izay ahafahanao maka sary, mampiditra lahatsoratra, manoratra horonantsary ary mizara azy ireo amin'ny namanao sy ny olon-tianao izay afaka hijery afa-tsy segondra vitsy monja. Ary, ity ny fomba famerenana ny hafatra voafafa amin'ny Snapchat? Io no singa tena mampiavaka sy mampihomehy ity fampiharana an-dahatsary ity izay tsy maintsy aseho amin'ny 10 segondra fotsiny ny sary nalefanao na azonao alohan'ny hamafana azy mandrakizay. Mamela anao hiresaka amin'ny namanao tahaka ny Facebook Messenger ihany koa izy.
Afaka mifandray amin'ny namanao ianao amin'ny alàlan'ny sary izay ahitan'izy ireo azy mandritra ny segondra vitsy alohan'ny handaozany mandrakizay raha tsy miala amin'ny sasantsasany amin'ny findainao. Vao haingana, ny app dia nahazo fanavaozana farany miaraka amin'ireo endritsoratra miavaka sy mahaliana toy ny Discover Messages ho an'ireo mpampiasa azy. Snapchat dia nahazo laza malaza teo amin'ny mpampiasa an-tapitrisany noho ny hevitra fa tsy afaka mahatsapa ny hafatrao aorian'ny fotoana. Fa tena marina ve izany marina izany? Afaka mandefa hafatra voafafa Snapchat ve ianao?
Na izany aza, azo atao tokoa ve ny olona mety hamerina sary sy lahatsary raha vao nesorina izy ireo? Eny, azo atao izany! Ireto misy fomba maro hanampiana anao hampiaka sary na lahatsary snapchat mba hahafahana mamerina ny angon-drakitra na dia efa voafafa aza ny angona. Ity misy torolalana amin'ny antsipiriany izay mampiseho anao ny fomba ahafahana mamerina haingana ireo hafatra taloha Snapchat amin'ny mailaka be.
Snapchat - App Video Sharing
Snapchat no fomba haingana indrindra hizarana fotoana mahafaly amin'ny namanao. Snapchat dia manome ny endri-javatra miavaka izay ahafahanao mifehy ny hahalalan'ny namanao ny hafatrao izay tokony hapetrakao mandritra ny folo segondra ary ahafahanao mandefa azy any amin'izay tianao. Snapchat dia mora ampiasaina fampiharana ary ny version farany 9.16.2.0 dia misy ho an'ireo mpampiasa Android.
Ahoana ny fomba hamerenana ny data amin'ny Snapchat?
Snapchat dia fampiharana malaza mamela anao haka sary, horonan-tsary ary hizara azy ireo amin'ny namanao. Ity fampiharana ity dia ahafahanao mandefa sary mba hahafahan'ny mpandray azy hijery azy io mandritra ny fotoana voafaritra sy voafafa tanteraka. Na dia mipoitra amin'ny hafatra App Snapchat aza ny hafatra Snapchat, dia mbola tsy nesorina tamin'ny findainao mihitsy izy ireo. Ireto misy fomba roa ahafahana manangona na mamerina ireo rakitra voafafa na hafatra ao amin'ny Snapchat. Zahao hahitanao azy!
Fomba 1: Fafao ny rakitra voafafa amin'ny Snapchat
Na dia manafatra hafatra ao amin'ny Snapchat aza ianao, dia voatahiry ao amin'ny tsi-piafaranao amin'ny alalan'ny .nomedia fanitarana. Ity endrik'ity fanitarana ity dia midika fa ny fampiharana rehetra dia tokony tsy hiraharaha izany. Raha fintinina, toa ireo sary sy lahatsary tsy misy rehefa voafafa. Na izany aza, mbola mitoetra ao amin'ny findainao ry zareo. Tsotra tsotra izao ny mahazo ny fidirana amin'ireo rakitra ireo indray.
Dingana 1: Manager Manager
Raha te haka ny hafatra Snapchat avy amin'ny findainao ianao dia mila manavao ny rakitra mba ahafahana manala ny extension extension.
Azo atao izany amin'ny fampiasana fampiharana manager. Azonao atao ny mahita ny apps fandefasana tsara indrindra ao amin'ny Google Play store, na koa azonao atao ny mandefa APK amin'ny Internet.
Raha mampiasa fitaovana Apple ianao dia mila mandefa jailbreak amin'ny findainao ianao ary mahita fitantanana fitantanana fitendry mety.
Ny sasany amin'ireo programa fitantanana fitantanana tsara indrindra dia ny Astro File Managers, ny mpilasoratra ny OI ary ny File Expert.
Dingana 2 - Fanavaozana ny rakitra
Fantaro ireo rakitra miaraka aminy nomedia extension on your device. Ny karazana fampiharana rehetra dia tsy miraharaha an'ity karazana dossier ity, izay mahatonga ny data tsy hita maso. Ireo no hafatrao rehetra avy amin'ny Snapchat.
Safidio ny hafatra tsirairay ary alao ny anaran'izy ireo mba hanesorana ny fanitarana.
Tokony hamela endriny hafa amin'ny rindrambaiko izany ary hampiseho ny sary vongana mba hahafahanao mijery azy ireo indray.
Alefaso fotsiny izany mba hahafahanao mahita ny rakitra voafafa ary mahazo sary Snapchat.
Fomba 2: Fampiasana App Dumpster
Ny dumpster dia fampiharana Google Play Store izay miasa toy ny fanodinana bara amin'ny telefaona android. Ny dumpster dia manome anao ny fahafahana manafina rakitra voafafa avy amin'ny fitaovana Android misy sary, vids, audio, pdf, zip, mp3, mp4, ppt, doc, avi, mpg, jpg, rar ary karazana tahiry rehetra. Tsy ilaina ny manala ny fitaovana ampiasainao ary na ny fifandraisana amin'ny Internet mihitsy aza dia tsy ilaina! Ity no fampiharana tsara indrindra izay afaka mamerina ny rakitra voafafa ao amin'ny Snapchat.
Tamin'ny voalohany, mametraka ny rindrambaiko Dumpster ao amin'ny fitaovana finday Android.
Avy eo, sokafy ny sary na lahatsary snapchat.
Ankehitriny, mila mankany amin'ny fampiharana Dumpster ianao izay ahitanao ny sary na horonan-tsary.
Alefaso ny APAMPIANTSIKA Dumpster mba hahitanao ny horonan-tsary na sary ao amin'ny Dumpster.
Fanamarihana: Ity fomba fiasa ity dia miasa raha tsy nisokatra ny sary na lahatsary snapchat teo aloha.
Ahoana ny famerenana ny angona Snapchat ao amin'ny iOS?
Raha te hanavao ny hafatra Snapchat avy amin'ny vokatra Apple iray toy ny iPhone na iPad, ampiasao ny app iPhone Data Recovery avy amin'i FoneLab. Ity rindrambaiko ity dia afaka manampy anao hamoaka ireo rakitra voafafa hita avy amin'ny iPhone na iPad.
Azonao ampiasaina ity app ity mba hamerenana ny angona avy amin'ny rindrambaiko samihafa. Amin'ity lesona ity dia hampiasaintsika ny hanangona Snapchat Data amin'ny iPhones.
Dingana mba hanarahana ny data snapchat avy amin'ny fitaovana iOS:
Raiso sy atsangano ny fitaovana FoneLab ao amin'ny Windows PC na Mac
Mampifandray ny fitaovana iOS (iPhone / iPad / iPod) amin'ny ordinateranao amin'ny fampiasana cable misy USB
Raha vantany vao miditra an-tserasera ny Recovery avy amin'ny fomba fiasa iOS, dia misy ny bokotra Start Scan hita eo amin'ny fitaovana misy anao.
Tsindrio ny bokotra "Start Scan" mba hanombohana mikajy.
Rehefa vita ny dingan-drakitra, dia fidio ny fizarana avy amin'ny sakafo izay tianao haka ny angona. Amin'ity tranga ity dia fidio ny "Messages snapchat"
Mifidiana ireo hafatra voavono rehetra tianao te-hiverina ary tsindrio ny bokotra mahomby mba haka ireo fanazavana voafafa.
Safidio ny lahatahiry mankany amin'ny toerana ary miandrasa mandra-panavaozana ny hafatra Snapchat.
Ahoana ny famerenana ny hafatra Snapchat amin'ny Android?
FoneLab koa dia mametraka fitaovana fanarenana ny data ho an'ireo fitaovana Android. Afaka mampiasa mora kokoa ny fitaovana FoneLab isika mba hamerenana ny hafatra Snapchat avy amin'ny fitaovana Android.
Araho ireo dingana tsotra ireo mba haka ny hafatra Snapchat amin'ny android:
Download sy hametraka ny FoneLab Android Data Recovery Tool for Windows PC na Mac
Mandehana any amin'ny sehatry ny findainao ary avelao ny fomba fandefasana USB ao amin'ny fitaovana Andoird anao.
Avy eo dia ampiasà kabosy USB, mifampitohy amin'ny telefaonina ny telefaoninao androany.
Ny fandaharana FoneLab dia hahita ny Android fakanao
Mandehana any amin'ny tabilao Data Recovery Android ary mifidiana "Contacts and Messages"
Halevina ny findainao raha vao mifidy ny safidy ianao
Avy eo, ho hitanao ny hafatra nofafana
Fantenao ireo hafatra nofafana voafaritra ary tsindrio ny bokotra Recovery
Ny hafatrao dia ho sitrana.
Ireto ireo fomba tsotra roa ireo mba hahasitrana na haka an-dahatsary voafafa toy ny sary sy lahatsary ao amin'ny Snapchat. Antenaiko fa ity torolalana ity dia hitarika anao amin'ny fomba tsara indrindra mba hahasitrana na haka sary na lahatsary efa voafafa ao amin'ny Snapchat video sharing app. Enjoy Snapping!
Ny hoavin'ny lahatsary finday dia zava-misy virtoaly
Ahoana ny fomba ahafahanao manao vondrona mifampiresaka amin'ny Snapchat: Mizara ny olona amin'ny hafatra 16 ny fanavaozana
Snapchat dia manangona "VR designer" mba hiasa amin'ny zava-misy
Ny fitaovana famoronana vaovao Snapchat: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao
WhatsApp dia manampy ny emoji snapchat, sary, ary fitaovana hafa fanontana fakantsary
WhatsApp dia mandefa SnapChat ary mamela anao hampiditra emoji amin'ny sary ... ary bebe kokoa
Jereo izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny Snapchat: Fampahafantarana ny Snapchat Bricks!
Facebook Messenger: Ahoana no fomba ampiasana ny New, Snapchat-Style Camera
File Samsung Galaxy Phone Windows 8 Microsoft Windows CentOS Support fitaovana Video MySQL hametraka Users ram 10 ubuntu 15.04 vaovao farany fifamoivoizana finday avo lenta Microsoft rafitra "PC IP adiresy Up " WordPress Firefox Windows 10 fitaovana Linux Ubuntu Systems Screen Ubuntu 16 Plugin Plugins Toetoetra fikarohana HTTPS command line Command lalao iPhone Debian SSH SEO PDG Twitter Database lalao toe-tsaina web server Rafitra fikirakirana Performance fitaovana finday One ' Ubuntu 14.04 fanamarinana OS X GNOME USB bilaogy Chrome Bing windows update Fitaovana finday Linux Mint Server PPA afa-po rindrambaiko famotsorana Cortana API Facebook loharano misokatra Apache HTML Nginx Google Apps Time Windows Unité centrale Ubuntu Unix MAMAKA SSD web browser app store 04 CentOS 7 PHP famerenana Windows Phone nbsp tahirin-kevitra HTTP Apple Watch Ubuntu 14.10 Linux bilaogy Samsung Android fitaovana Company raki-daza endri-javatra Malagasy Bible taona haino aman-jery sosialy YouTube 'App paoma takelaka fikirakirana